कौतुहलता अड्किएको मन.....!
संसार बदलिएको छैन होला, मनैपो बदलियोकी
तिम्रो मेरो झुठो हल्ला हावासरी फैलियो की ।
आँखा तरी हेर्ने गर्छन, वरपर छर छिमेक
निराशको बादल छाई तिम्रो मन सेलियोकी
यहाँ को छ र तिम्रो मेरो भलो हेर्न सक्ने ?
कसैको छ्ड्के नजरले तिम्रो बिस्वास पेलियोकी
सबै यहाँ बैगुनी, गुणी खोज्न जाउँ कता ?
बैगुनीको ठुलो सञ्जाल तिम्रो दिलमा जेलियोकी
भ्रम पैदा गर्नेहरु, यहाँ ठुलो लस्करै छन
त्यहीं भ्रम बिचमा परी मेरो माया मैलियोकी।
बि.जे जी मिठो लेखको लागि धन्यबाद।
मिठो गजल । मन हो b. j. जी जतापनि सोचिहाल्छ नि आखिर मायालुको याद त हो ।
त्यसरि मनलाई नअडकाउनुस जहाँ छिन कुशल छिन आराम छिन ।
गजल रमाइलो छ बिजे जी । भाव मर्मस्पर्शी छ । तर काफीयाप्रयोगमा अलि बेमेल भएकाले मज्जामा अलि अवरुद्धपन आउने देखेँ मैले । टिप्पणी गर्नुपर्दा प्रचलनमा प्रशंसा नै नत्र तीतो-टर्रो बोल्दा खप्की खाइने र आपसमै तिक्तता बढ्ने लहर छ हाम्रो नेपाली बौद्धिक जमातमा । म भन्ने जान्ने भएर बोल्दैछु, त्यो सबैको र हाम्रो नेपाली गजल लेखनको लागि राम्रै होला भनेर यतिबेला सोच्दैछु । अन्यथा ठान्नुहुनेछैन । म यहाँ हदै संरचनावादको पनि वकालत गरिरहेको छुइनँ, र स्वतन्त्रताको नाममा विधागत परिचय पनि नगुमोस् भन्ने लोभ पनि सँगालेको छु ।
तपाईँको गजलमा, हेर्दाखेरि एकाक्षरी काफीया पनि होइन, पूर्ण काफीया नै प्रयोग गर्नुभएको छ । 'बदलियो- कहलियो' भएको भए अथवा एकाक्षरी काफीया 'रगत-औसत-हालत' प्रयोग गरेको भए पाच्य मान्न सकिन्छ । किनभने लेखाइको धाराले नै त्यो खुला सीमा अँगालेपछि भँगालोलाई दगुराउन सकिन्छ अलि खुला भएर । तर काफीया पूर्ण रूपमा मिलाउने नै गरी लेखेर यताउता केके नमिलेको जस्तो 'बदलियो र मैलियो' लेख्‍दा त्यसमा मिठास आउँदैन । तपाईँको काफीया तुकबन्दी यहाँ 'लियो' मात्र नभई पक्कै पनि 'ए कार' र 'लियो' वा 'अ कार' र 'लियो'जोडिएर लेख्‍न खोजिएको प्रस्‍ट हुन्छ । तर लेखाइले त्यो पाएन । हुन त अचेल शब्दको सीमिततामा च्यापिएर भाव दिन सकिएन भन्ने हिसाबले हो या के हो, भारतीय गजलमा भयो-सोध्यो जस्तो गरेर अन्तिमको एक अक्षरमा मात्र काफीया मिलाउने उदाहरण देखिँदैछ । तर हाम्रो नेपाली गजलमा भने भएकै सामान्य शब्दलाई काफीया बनाएर उत्कृष्‍ट गजल लेख्‍न बाँकी छ, त्यसैले त्यस्ता भारतीय गजल लेख्‍न पनि हामीलाई हतारो छैन । गजल धेरैभन्दा धेरै लेखौँ, तर सोचेर-बुझेर मात्र । यसरी नै छलफल गरौँ, सँगै केही ठोस कुरा दिऔँ । तब पो आफ्‍नो सर्जकीय नाम पनि दुनियाँमा बस्ला, साहित्यिक पाटोमा पनि मोती जम्मा होला ।
यति भनेर मैले बिजे जी एक्लैलाई भने यो टिप्पणी सुनाएको होइन, समस्त गजलप्रेमीलाई यो भनाइ उपयुक्तै होला भन्ने सोचेर टिप्पणी लेखेको बेला अलि लामो गरी लेखेँ । बिजे जी तपाईँको ब्लगमा यति ठाउँ लिएँ है मैले त । अन्यथा भए माफ पाऊँ ।
धन्याबाद सम्पुर्ण मेरा मित्रहरु मुख्यगरी मेरो लेखहरुलाई समय दिएर यसो सर सल्लाह दिएर सहयोग गर्नु हुने मित्रहरु, सुजन शर्मा, सिकारु सुर्य एबं मेरो भावनालाई गजल भन्न पुँगे अनि तर मलाई गजल लेखन मलाई अनुभव भएन र पनि मलाई मन पर्ने एउटा बिशेष खुराक भएको कारण कोर्न पुँगे यसलाई कुनै संज्ञा दिन सकिन त्यसैले गजल भनिदिएँ तर पजल भयो। मलाई आशा छ म जस्तै थुप्रै शिकारु मित्रहरुको लागी जोतारेधाईबा जी को सरसल्लाहले एउटा मुहुर्त दिने छ र शायद आगमी दिनहरुमा कुनै कुनै लेखमा ध्यान पुर्‍याईने छ यसको लागी धन्यबाद धाईबा जी।
सिकारु जी कहिलेकाहीं यो मनै न हो बतासिदो रहेछ, जे पायो त्यहिं लेख्न बतासिदो रहेछ, दुई चार शब्द कोरि दिएहौ हौ मित्र के गर्नु मनै नमाने पछि कसैको याद बिना दिनै नकाटिदो रहेछ।
अनि सरल भाव तर प्राविधिक ( गजल सम्बन्धी ) ज्ञान चाहि बढाउनै पर्ने रहेछ |
लौ है बि.जे. जी तपाईंको गजल शाह्रै राम्रो लाग्यो । जसको चौथो हरफको काफियाले चाँही झनै मनै छोयो ।
धन्यबाद सम्पुर्ण मेरा मित्रजनहरुमा तपाईहरुको आगमन अनि अनि मेरो गफगाफमा सहभागिता जनाई आफ्नो अमुल्य समयको लागी। बेदनाथ जी, अर्जुन जी एबं एकल यात्री जी मा धेरै धेरै धन्यबाद।